Omenala India na omenala ya | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | omenala, Gastronomy, India, Asia njem
A maara ọdịbendị ndị India gburugburu ụwa dịka otu n'ime ọdịbendị siri ike na omimi nke dị taa, okwu a magburu onwe ya nke Eshia bụ ihe sitere na njikọta na-adọrọ mmasị na ngwakọta nke ihe dị iche iche. Ọ bụ nnukwu ngwakọta ọdịbendị nke tinyegoro usoro sitere na mba ndị agbata obi ya, na -emepụta ọdịbendị ọdịbendị dị egwu dị iche iche, nke gosipụtara n'akụkụ ndị sitere n'okpukpe ruo na ije, nka, gastronomy ma ọ bụ omenala. Onu ogugu di iche iche emeela ka ọ ghọọ otu n'ime mba ndị na-adọrọ mmasị na mbara ala, na ebe ndị njem kachasị mma maka ndị njem si n'akụkụ ụwa nile.
Omenala Hindu a na-enye ọdịnala kemgbe ọtụtụ puku afọ, nke na-agaghachi ka Rig-Veda, bụ́ ihe odide kasị ochie n’India, site na narị afọ nke iri na ise BC Mgbe mbuso agha Alakụba na nchịkwa nke mba ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ overwa na-achị India, ọ bụ ọdịbendị dịgasị iche iche na-emetụta ya, ma na-ejigide isi ya na ọdịnala ya. Ọ gaghị ekwe omume ịgwa ọtụtụ puku afọ nke ọdịnala na ọdịbendị na otu post, mana anyị ga-anwa ịmepụta ọhụụ sara mbara nke ọdịnala India na ihe na-adọta anyị na ya.
1 Obere akụkọ ihe mere eme nke India
2 Usoro mkpo nke omenala India
3 Okpukpe na India
4 Egwu na egwu nke omenaala Hindu
5 Gastronomy nke omenala India
Obere akụkọ ihe mere eme nke India
Oge ochie akụkọ ihe mere eme nke India na-ekewa n'ime Oge Vedic na oge Brahmanic. Nke mbu bu nke kacha ochie n’afọ 3000 BC, mgbe ndi Dravidian mepere emepe nwere omenaala mepere emepe, ya na ulo oru nchara, oru ugbo na obere obodo, na mgbakwunye na okpukperechi di iche-iche. Oge Brahmanic bịara mgbe ndị Brahmins, nke a na-esi na Caspian Sea, na-achịkwa ókèala na -emepụta obere alaeze. Otú ọ dị, mgbe ha chịsịrị ọchịchị na ike ọchịchị, ndị mmadụ nupụrụ isi ma kpatara Buddha.
La akụkọ kachasị ugbu a na-ekwu banyere mbuso agha nke ọdịbendị dị iche iche, site na Peasia na ndị Arab, Portuguese ma ọ bụ Bekee. Ọ bụ nchịkọta sara mbara nke ukwuu, mana ọ na-enye anyị echiche banyere mmetụta niile omenaala India gbanyere mkpọrọgwụ natara kemgbe ụwa.
Usoro mkpo nke omenala India
Usoro a nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-enweta kpọmkwem site n'okpukpe Hindu, okpukpe ndị bụ isi nke India. Ọ na-akụziri anyị na e kere ụmụ mmadụ site n'akụkụ dị iche iche nke ahụ chi Brahma, wee si otú ahụ kee ụlọ anọ ha jiri chịa ha ọtụtụ narị afọ.
Site n'ọnụ chi Brahma ka ndị Brahman, ndị otu kachasị ike, nke ndị ụkọchukwu pụta. The chatria bụ ndị dike a ma ama, sitere na ogwe aka nke chi. Ndị Vaisías bụ ndị ahịa na ndị ọrụ ugbo, ndị si n'apata ụkwụ chi ahụ pụta, ndị sudra ma ọ bụ ndị odibo bụkwa ndị nkiti kachasị ala, ndị si n'ụkwụ chi ahụ pụta. Na mgbakwunye na ndị a bụ ndị a na-apụghị ịgụta ọnụ, ndị a na-ewere dị ka ndị a jụrụ ajụ, na ndị na-abụghị akụkụ nke ndị castes ma ọ bụ ọha mmadụ, ebe ọ bụ na ha nwere ike ịrụ ọrụ kachasị dị ala, dịka ịchịkọta nsị mmadụ. Ka ọ dị ugbu a, a na-egbochi ndị castes n'ụzọ iwu kwadoro, mana a na-echekwa ha n'ihi ojiji na omenala yana etu gbanyesiri mkpọrọgwụ ike ndị a na ọha mmadụ.
Okpukpe na India
Okpukpe bụ akụkụ dị oke mkpa nke ọdịnala ndị India, taa, e nwere okpukpe anọ nke India ma ọ bụ Dharmic. Okpukpe Hindu bụ okpukpe kachasị ewu ewu, yana nke atọ kachasị ukwuu n'ụwa. N'ime ya bụ ọtụtụ ụlọ akwụkwọ na ọdịnala dị iche iche, ọ bụkwa okpukpe na-agbaso ọdịnala nke ndị castes. Chi ukwu ya bu Rama, Shivá, Visnú, Krisná na Kali.
N'aka nke ọzọ enwere Buddha, nke ise kachasị mkpa n'ụwa, nke Sidarta Gautama, nwa Raja nke alaeze Sakias guzobere, onye hapụrụ ihe niile wee bụrụ onye arịrịọ, na-akpọ onwe ya Buddha, nke pụtara onye nwere nghọta. Ọ dabere na omume nke ezi, ọrụ ebere, ịhụnanya na omume ọma ndị ọzọ ma ọ bụghị echiche. E nwekwara okpukpe Yain, nke yiri Buddhist, na Sikhism, bụ otu okpukpe na-ekpe otu okpukpe, nke dị n’agbata Alakụba na Hindu.
India: Nkwenkwe na Chi
Egwu na egwu nke omenaala Hindu
Okwu egwu bu otutu egwu ndi mmadu na ndi oge gboo, nke dugara n'ịmepụta egwu dị egwu na nke a na-ahụkarị nke mba ahụ. Otú ọ dị, E nwere 8 ịgba egwu Hindu ndị nkewaputarala dị ka ndị gboo, ma ndị e tinyeworo n’usoro nkuzi ọdịnala n’ihi ọnọdụ ha dịka nkwupụta ọdịnala ndị Hindu. A na-akụzi ya na National Academy of Music, Dance and Drama, ma gụnyere egwu nke: bharatanatyam, kathak, kathakali, mohinyattam, kuchipudi, ifuru, odissi y sattriya. Ndị a bụ egwu nke ụdị akụkọ dị iche iche na-agụkwa akụkọ akụkọ ọdịnala dị ịtụnanya, ịgaghị aga India na-enweghị ịhụ otu n'ime ihe ngosi ndị a magburu onwe ya.
A na-enwekwa egwu ndị mmadụ n’egwuregwu n’akụkụ ụfọdụ nke mba ahụ. E nwere Bauls na Bengal, egwu Bhangra dị n'ebe ugwu ma ọ bụ Quawwali na Pujab.
Gastronomy nke omenala India
Iri ebe a bụ njem maka okpo ọnụ. A maara nri Indian maka ụtọ ya dị ụtọ, yana maka ọkaibe n'iji ngwa nri dị iche iche, na-adabere na osikapa na ọka. Ọtụtụ ihe nri dị iche iche anyị na-eri taa, dị ka ose ojii, sitere ebe a, ya mere ndị Hindu nwere njikwa ha pụrụ iche. Agbanyeghị, nri a nwere ike bụrụ ihe dịtụ njo nye ndị na-arịa ahụ nfụkasị, na-enwe ụdị nri na-ekpo ekpo, ihe karịrị otu onye nwere ike isiri ya ike.
Enwere nri dị iche iche ị kwesịrị ịkwụsị ịkwụsị ịnwale mgbe ị gara India, ebe ọ bụ na gastronomy bụ akụkụ dị mkpa nke ọdịbendị nke mba ọ bụla. Tandoori chicken bụ anụ ọkụkọ anụ eghere eghe na yogọt ma tinye ya na ngwa nri tandoori. E nwekwara nri ndị ọzọ ị nwere ike ịdị ka ị maara, dị ka biryani, nke bụ osikapa na ngwakọta ngwa nri, ebe anyị ga-echezọ na ngwa nri dị ezigbo mkpa na nri ndị India. Pizza Indian ma ọ bụ uthathaappam bụ ntọala nke mgwakota agwa nke ntụ ọka lentil na osikapa na akwụkwọ nri na ihe ndị ọzọ, dịka pizzas ndị a na-emebu. Na mpaghara ato uto ị nwere jalebi, ihe mgwakota agwa dị ụtọ etinyere na sirop, nwere agwa oroma mara mma na ọdịdị nke conch akpọrepu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » omenala » Omenala Hindu
Ọfọn, ọ dị m ka ọ dị ntakịrị ma ezi ozi na ihe kpatara m ji mepee ibe bụ n'ihi na achọrọ m ozi a nke ukwuu ma achọpụtara m na ọ na-atọ m ụtọ
Nkwanyere 24 dijo
Achọrọ m ịme ogwu nke ishikawa na omenala ndị Hindu nke a bụ ihe kachasi ike trying
sergio cano dijo
magburu onwe peeji
Zaghachi na sergio cano
ana maldonado dijo
ps echere m na odi nma
Zaghachi ana maldonado
jullian r dijo
Achorom ihe ndi ozo banyere omenaala ebe m nwere ebento daalụ
Zaghachi jullian r
nke kacha mma dijo
N’ebe m nọ, ọ dị ka ọgaghị ama ihe ọmụma dị na ya ma ọ dị mkpụmkpụ ọ bụghị dịka ndị na-asụ sonseras
Zaa ndị kasị mma
Ihe omuma a di nma nke oma mana o pere mpe
Echere m na ọ bụ ozi dị nkenke ma chịkọta ma karịa ihe niile ọ na-akọwa gị nke ọma na nke ahụ bụ ihe dị mkpa ebe ọ bụrụ na ị gaa na ibe ndị ọzọ ha ga-akọwapụta nke ọma na isiokwu a nke ukwuu ma na njedebe ị ghọtaghị ya ọ dị ka ezigbo mma nyeere m aka ịghọta obere ihe
Zaghachi Jacqueline Jimenez
lara na bea dijo
imeela nnọọ ọrụ a
Reply to lara e bea
Ekwenyere m na ọdịbendị a bụ aghụghọ taa; na ọ na-ebute ọha mmadụ na-esiteghị ebe ahụ iji nweta omenala ndị ọgọ mmụọ nke na-akpasu Chineke iwe naanị Chineke. N'eziokwu, Jehova nke usuu ndị agha zitere otu nwa nwoke ọ mụrụ bụ Jizọs onye Nazaret ka ọ nwụọ maka mmehie anyị n'obe nke Calvary, ọ bụrụ na ị na-eme omenala ndị a, chegharịa, ma rịọ Chineke mgbaghara bụ onye nwere nnukwu ebere ịgbaghara ma zọpụta site na ọnwụ na ọkụ mmụọ , A na m akpọku gị ka ị kpee ekpere a n'oge a, Onyenwe anyị na Nna Dị Nsọ Ana m ekele gị maka ikwe ka m gụọ ozi a bụ ịzọpụta mkpụrụ obi m pụọ na amamikpe ebighi ebi, daalụ maka iziga nwa gị nwoke bụ Jizọs Kraịst ịnwụ n'obe , gbanwee nmehie m ka o nye m nzoputa na ndu ebighi ebi, a na m emepe obi m nye gi ma a na m ario gi ka i bata na ndu m ma gbanwee ihe nile na-adighi gi nma, anuru m ka i na ede aha m n’akwukwo nke ndu ma hichaa ya.
Enyi onye na-agu ozi a a na m akpọku gi ka i guo na Baibul ihe bu okwu Chineke, ozioma nke Luk isi 5, ama 15, Chineke gozie gi,
Omenala a bụ ụgha nke na-eduhie ọtụtụ nde mmadụ ndị hapụrụ ụzọ ezi n'ihi na Jizọs kwuru na abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ ma ọ dịghị onye na-abịakwute nna ma site na m
Chegharịanụ ma rịọ mgbaghara Chineke onye ebere na-agbaghara gị ma ọ bụrụ na ị bịakwute ya ị na-arịọ mgbaghara maka mmehie gị,
Mepee obi gi nye ya ma gwa ya na i nyere ya ndu gi ma kwe ka o banye na ndu gi ma hichaa ihe ojoo gi nile ka i ghara ikpe onwe gi ikpe na oku ala mmụọ,
M na-akpọ gị ka gị na gị kpee ekpere a
Nna di nso a na m ario mgbaghara gi maka na emejoro gi, nihi na dafuru uzo gi, ta m cheghari we juo gi ka m bata na ndu m, anuru m ka idere aham n’akwukwo ndu ma ghara ihichapu ya, nyere m aka ka m chota ụzọ nke na-eduga na nzọpụta na ndụ ebighi ebi, n'aha nwa ị hụrụ n'anya, amen.
Enyi, o buru na iguru ozi a, a na m ayo gi ka igu n’ime Baibul na okwu Chineke bu akwukwo Luk, isi 5, amaokwu 15. Chineke gozie gi.
yulli tatiana duque dijo
Ọ ga-amasi m ịmata ihe uwe ha pụtara, ọkachasị ụmụ nwanyị n'ihi ihe ịchọ mma ha mara mma na otu ha si dị ka chi nwanyị.
Zaghachi ka yulli tatiana duque
Biko ekwula okwu na-adịghị mma, onye ọ bụla kwenyere n'ihe kacha amasị ha ma ọ bụ mee ka obi dị ha mma, anyị ga-asọpụrụ ibe anyị. onye ọ bụla nọ na ndụ a ga-ekwere na ihe. biko kwanyere ugwu. Abụ m onye Katọlik ma ana m ege onye ọ bụla ntị, na ọ nweghị ihe ga-agbanwe ụzọ m kwenyere.
Enrique Quinones dijo
peeji ahụ dị mma mana n'onwe ya anaghị ebunye ma ọ bụ gosipụta otu omenala ha si adị kwa ụbọchị
Zaghachi Enrique Quinones
Abụ m onye Kristian na iwe adịghị m ma ọlị. E kwuwerị, ọ bụ na ọ bụghị naanị otu Chineke na-adịkarị? (N'okpukpe niile ma ọ bụ ihe niile, anụrụ m n'otu akwụkwọ akụkọ banyere India na agbanyeghị na ha nwere ọtụtụ chi maka ha, ha nwere ikike ma ọ bụ njirimara dị iche iche mana n'ime ala ọ bụ ike nke otu Chukwu. Na Buddhist n'agbanyeghị agbanyeghị echiche na-abụghị eziokwu) eziokwu, Buddha n'otu oge kwuru na ọ nwere mmetụta dị omimi nke na ọ nwere mmetụta ma ọ bụ nwee ọnụnọ Chineke). Na mgbakwunye, okpukpe niile na ihe ndị yiri ya na-achọ ka anyị bụrụ ezigbo mmadụ, na nkenke, ha niile na-eduga anyị na nke ahụ. Ahụghị m ókèala, amaghị m gbasara gị. anyị niile bụ ụmụnne.
Achọghị m ịga n'ihu na mkparịta ụka okpukpe mana emesịrị m chee na ụzọ m si ahụ ihe nwere ike inyere mmadụ aka, na-achọghị ịmejọ.
ekele maka isiokwu ahụ, o nyere m ezigbo nlele nke ihe India na-adị.
ekene m unu niile!
Zaghachi Daniela Miralles
Elizabeth onyekwere dijo
Maka akwụkwọ ndị ọzọ, ana m akwado akwụkwọ akụkọ abụọ na-adọrọ mmasị ma na-ede akwụkwọ bụ TOWERS of SILENCE na ASHE NA GODAVARI RIVER, nke dị na AMAZON, na-ekwu banyere ọdịnala na ọdịnala ndị Hindu, nkọwa obodo, ọdịdị, nka na ebe izu ọchị.
Zaghachi Elizabeth Martinez
N'ezie Las Torres del silencio bụ akwụkwọ magburu onwe ya.